Họrọ Rightlọ Nri Kwesịrị Ekwesị
Home / Foset Guide / Họrọ Rightlọ Nri Kwesịrị Ekwesị
2020 / 10 / 21 nhazi ọkwaFoset Guide 1389 0
You kpebie imeghari kichin gị? Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-enye ebe kichin kichin gị mmelite, dochie kichin kichin bụ nwelite nke nwere ike rụzuru n'ụzọ dị mfe. Agbanyeghị, yana ọtụtụ ụdị dị iche iche, imecha, na ụgwọ nke ihe eji esi nri kichin dị n'ahịa taa, kedu ka ị ga-esi kpebie nke ziri ezi? Họrọ ọkpọkọ kichin ọhụrụ nwere ike ịghọ ọrụ na-agwụ ike ma ọ bụrụ na ị maghị kpọmkwem ihe ị chọrọ. Ka anyị malite site na ịlele ụdị ụdị kichin asaa dị iche iche, mgbe ahụ anyị ga-emetụ aka na echiche ndị ọzọ ị ga-eme mgbe ị na-ahọrọ ọkpọkọ kichin kwesịrị ekwesị.
Igosipụta isi nwere ike iwepụ, ọkpọkọ kichin na-ewepụta maka ọtụtụ mmegharị. Ọ na-enye gị ohere ịnweta usoro oge niile ma ọ bụ nhọrọ ịgba. Nke a na - eme ka ọ dịrị ya nfe ịbịaru nkuku niile nke mmiri mmiri ahụ, ụfọdụ ụdị na - ekwe ka ọ rute na tebụl iji nye ya ohere iji mejupụta ite nwere ike buru oke ibu ka ọ ghara ịbanye na sink. Ihe ọkpọkọ na-adọrọ adọrọ na-enwekarị otu njikwa, yabụ ịnwere ike iji otu aka chịkwaa mmiri na ọnọdụ okpomọkụ mgbe ị na-eji aka nke ọzọ adọta pọmpụ ahụ.
Nhọrọ zuru oke maka ịsa efere, ọkpọkọ kichin na-egosipụta ọmarịcha gooseneck spouts. Ihe ọkpọkọ ndị a na-ewu ewu maka ezi ihe kpatara ya. Kpu ọkpọkọ kichin na-eme ka ọ dị mfe ikwe ka mmiri rute n'akụkụ ọ bụla nke sink, yana ịbịanye n'akụkụ ọ bụla na ite na ite gị mgbe ị na-asa ha. Isi ha kwadoo na-agbada ala, ma ọ naghị apụ, dị ka ọkpọkọ ọkpọ ọkpọ na-eme. Maka nke a, ọ bụrụ n ’ịhọrọ ọkpọkọ ọkpọdọ, ọ ga - akachasị mma ka ị nwee igwe miri emi. Ọ bụrụ na ihe imi gị emie emie nke na-emighị emi, o yikarịrị ka ị ga-ejedebe mmiri ị na-efesa.
Otu-eji kichin faucets na-egosipụta gooseneck imewe, na-eji otu aka na-apụkarị otu akụkụ. Otu njikwa na-adị mfe ịkwaga site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ iji gbanwee ọnọdụ mmiri. Ihe ọghọm bụ na ọ nwere ike ịdị nhịahụ nke na ọ nwere ike isiri ike ị nweta mmiri ahụ na ọnọdụ okpomọkụ ịchọrọ. Otú ọ dị, uru nke ọkpọkọ aka na-arụ bụ na ha nwere ike ịdabere na ya, dị mfe idozi mgbe ọ dị mkpa ma nwee usoro mara mma, mara mma. Ọ bụrụ n’ikpebie n’elu pọmpụ otu aka, jide n’aka na ị ga-ahọrọ nke nwere profaịlụ toro ogologo, ka i wee nwee ike dabara ite gị toro ogologo na paanụ n’okpuru pọiti ahụ.
Ihe eji eme ihe abuo
A na-ahụkarị ọkpọ mmiri na-arụ ọrụ abụọ na kichin taa. Otu njikwa bụ maka ọkụ, nke ọzọ maka oyi, ebe spout dịkwa na etiti. Styledị ahụ kwesịrị ekwesị maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị kichin ọ bụla mgbe a họọrọ njedebe kwesịrị ekwesị. Ka aka dị iche iche, ị na-enweta mmiri ọkụ ngwa ngwa, yana ọkụ na oyi dị iche, ị na-enwe ike ịnweta ọnọdụ mmiri dị ka ịchọrọ. Naanị azụghachi bụ na iji aka abụọ, ị ga-eji aka abụọ mee mgbanwe okpomọkụ ma ọ bụ jiri otu aka na-agagharị n'etiti aka abụọ ahụ ma ọ bụrụ na ị na-esi nri nke ọma.
Zuru oke zuru oke maka isi nri dị egwu, ọkpọkọ kichin na-enweghị emetụ aka na-eji ife aka gị dị mfe. Ha na-arụ ọrụ mgbe obere ihe mmetụta na-ebute mmiri mgbe ị na-efegharị ite ma ọ bụ aka gị n'ihu ya. Ọ bụ nnukwu azịza maka nsogbu nke aka gị ịbụ onye emetọ site na ijizi anụ adịghị, dịka ọmụmaatụ. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịmara na iji mee ka ọnọdụ okpomọkụ na mmiri na-asọba, ị kwesịrị imetụ aka ahụ aka, na ntọala ya. Naanị ihe a na-akpọ aha nke mmiri kichin na-enweghị ntụpọ bụ na ọ na-abịa na ọnụahịa dị oke ọnụ.
Ọnọdụ bụ ihe niile. Akụkụ a kacha mara amara nke ite ite bụ na ọ dị na mpaghara azụ azụ n'azụ kichin gị. N’ịdabere dị ka ọ nwere ike ịbụ, inwe ite ite na-ewepụ mkpa ọ dị ijuju ite dị arọ na sink ma buruzie ya na stovu ahụ. Na mgbakwunye, olee ihe ga-aba uru karịa ịnwe isi iyi ọzọ na kichin gị? Nke a pụtara na ị nwere ike iji ite ite maka isi nri, yana kichin kichin gị maka ịme efere ma ọ bụ ịsa aka gị. Naanị otu ndọghachi azụ bụ na ndị na-etinye ite n’ọkụ n’obodo ha n’ebe dị anya site na pọmpụ mmiri mmiri, yabụ ndị ọkachamara na-etinyekarị ha.
Ọ bụrụ na ị na-achọ nhọrọ kachasị mma na kichin kichin, lee anya karịa faịlị mara mma. Otu ọkpọkọ mara mma na-ege ntị n'ihe ị na-agwa ya ka ọ mee ma soro ntuziaka gị. Na-agwa ya ka ọ gbanye ma chọta otu ọnọdụ okpomọkụ, ọ na-emekwa. Gwa ya na ịchọrọ iko mmiri, ọ na-atụpụta ego ole ahụ. Smart fosets abịa onwem na ụdị nile nke fancy atụmatụ dị ka dijitalụ ngosipụta na aka-free ọrụ. Ihu ọma, ọ bụ nhọrọ kachasị mma ma dị ọnụ ala maka osi nri siri ike.
Iji họrọ ọkpọkọ kichin kwesịrị ekwesị, ịkwesịrị ikpebi otu a ga-esi kwụnye ọkpọ ahụ. Ndị a bụ ọnọdụ atọ ị ga-atụle:
Nke gara aga :: Kedu otu esi ahọrọ ma zụta ọkpọkọ mmiri ọkụ na-agba ọsọ? Osote: Gịnị mere e ji nwee nnukwu ọdịiche dị n'etiti pọmpụ $ 30 na $ 300?